प्रधानमन्त्री निवास भत्काइँदै, कहाँ सर्लान् प्रधानमन्त्री ओली?
निको भएका ३००१९८
अपडेटः बुधबार, चैत २६, २०७६ । ६:३० बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu
नेपाल लाइभ बुधबार, मंसिर ४, २०७६, १९:२७
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको मुख्य भवन भत्काइने भएको छ। विक्रम संवत् २०१९ सालमा डा तुल्सी गिरी प्रधानमन्त्री भएका बेला बनाइएको सो भवन पुनर्निर्माणका लागि भत्काउन लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री निवास रहेको सो भवनमा बुधबार बसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक अन्तिम भएको छ। अब तत्कालै सो स्थानमा भवन भत्काउने काम सुरु हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
योसँगै प्रधानमन्त्री ओली हालको प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवासमा सर्न लागेका छन्।
'प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवासमा सर्न लाग्नुभएको छ। हाल उहाँको निवास रहेको स्थानमा अब पुनर्निर्माणअघि कुनै औपचारिक कार्यक्रम हुने छैनन्,' प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले भने।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भने सभामुख निवासमा सारिसकेका छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सभामुख निवासमा सरेसँगै यसअघि 'सभामुख निवास' लेखिएको प्लेट हटाइ सकिएको छ।
कोरोनाविरुद्ध लड्न ट्वीटरका संस्थापकले गरे १ अर्ब डलरको सहयोग घोषणा
आइसीयुमा राखिएका बेलायती प्रधानमन्त्रीको अवस्था स्थिर
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ८१ हजार ८ सयले गुमाए ज्यान
सचिवालय बैठकमा नेताहरूको माग : मेडिकल सामग्री खरिदका दोषीलाई हदैसम्म कारबाही हुनुपर्‍यो संक्रमणका बेला अनियमिता हुनु अक्षम्य अपराध भएको बताउँदै नेता खनालले जिम्मेवार व्यक्तिबाट कसरी अनियमितता भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।... मंगलबार, चैत २५, २०७६
नेकपाको निष्कर्ष : सरकारका कदम सही प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले चालेका कदम र लिएका न... मंगलबार, चैत २५, २०७६
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको कार्य ठिक भएपनि कार्यान्वयन फितलो : राप्रपा कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारबाट भइरहेका कार्य र प्रयास ठिक भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनाए... मंगलबार, चैत २५, २०७६
कोरोनाविरुद्ध लड्न ट्वीटरका संस्थापकले गरे १ अर्ब डलरको सहयोग घोषणा बुधबार, चैत २६, २०७६
आइसीयुमा राखिएका बेलायती प्रधानमन्त्रीको अवस्था स्थिर बुधबार, चैत २६, २०७६
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ८१ हजार ८ सयले गुमाए ज्यान बुधबार, चैत २६, २०७६
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ लाख नजिक बुधबार, चैत २६, २०७६
फोर्ब्स अर्बपतिको १५१३औँ स्थानमा विनोद चौधरी, सम्पत्ति भने घट्यो मंगलबार, चैत २५, २०७६
कालोबजारीमा समातिएका अग्रवालले सेटिङमा चीनबाट ल्याएका थिए चार्टर जहाजमा मेडिकल सामान मंगलबार, चैत २५, २०७६
कोरोनाका बिरामी : किन र कतिलाई चाहिन सक्छ आइसियु? सोमबार, चैत २४, २०७६